Ala ọmajiji kpara Tonga ụbọchị ole na ole ka mgbawa ugwu gbawara agbawa
Location: Mbido » Ịdee » Obodo | Mpaghara » Tonga » Ala ọmajiji kpara Tonga ụbọchị ole na ole ka mgbawa ugwu gbawara agbawa
Ala ọmajiji kpara Tonga ụbọchị ole na ole ka ugwu mgbawa mebiri emebi
Mpaghara ahụ ahụla ọrụ ọma jijiji kwa ụbọchị kemgbe ugwu mgbawa Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai gbawara na Jenụwarị 15, gbuo mmadụ atọ wee ziga tsunami gafee Pacific.
Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ala Mba United States (USGS) kọrọ na ala ọmajiji ruru 6.2 mere n'ebe ọdịda anyanwụ-n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Pangai. Tonga, na Tọzdee, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ izu abụọ ka e bibiri ala-eze Pacific site na a mgbawa ugwu mgbawa na tsunami.
Ala ọmajiji ahụ mere na omimi nke 14.5km.
Ọgba aghara ahụ dị 219km (kilomita 136) n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke Pangai, obodo dị n'agwaetiti dịpụrụ adịpụ nke Lifuka, dịka data USGS siri kwuo.
Enweghị akụkọ gbasara mmebi ozugbo, mana nzikọrịta ozi nwere oke ka mgbawa nke mbụ kwụsịrị isi eriri USB n'okpuru mmiri Tonga ụwa.
The Mgbawa ugwu, nke kasị ukwuu kemgbe Pinatubo na Philippines na 1991, wepụtara nnukwu ígwé ojii nke ntụ nke kpuchiri mba ndị dị n'agwaetiti Pacific ma gbochie nlegharị anya iji chọpụta ókè mbibi ahụ ruru.
Enwere ihe dị ka otu nde ugwu mgbawa n'okpuru oke osimiri ndị, dị ka ugwu mgbawa kọntinent, dị n'akụkụ efere tectonic nke Ụwa ebe ha na-etolite.
Dị ka òtù Global Foundation for Ocean Exploration Group si kwuo, ihe dị ka “ụzọ atọ n’ụzọ anọ nke ọrụ mgbawa ugwu nile a na-enwe n’Ụwa na-eme n’okpuru mmiri.”
N'afọ 2015, Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai wụsara ọtụtụ nnukwu okwute na ntụ n'ikuku nke mere ka e guzobe agwaetiti ọhụrụ.
Na Disemba 20 na mgbe ahụ na Jenụwarị 13, ugwu mgbawa ahụ gbawara ọzọ, na-eke ígwé ojii ntụ nke enwere ike ịhụ site na agwaetiti Tongatapu.
Na Jenụwarị 15, nnukwu mgbawa ahụ kpalitere mbufịt mbufịt gburugburu Pacific, na usoro nke ka na-arụrịta ụka n'etiti ndị ọkà mmụta sayensị na mmalite ya.
Ala ọma jijiji Ocean Philippines Tonga United States
Otu mmadụ iwe ji ọkụ gbaa ụgbọ oloko ọkụ n'India maka ule ụgbọ okporo ígwè arụrụ arụ
Adịkwaghị 'ihe gbasara ọha na eze': Denmark kpochapụrụ mmachi COVID-19 ikpeazụ
Patent US ọhụrụ maka ọgwụgwọ ọnya ụkwụ ọrịa shuga ...
Ememme Oktoberfest na-alaghachi na Munich n'afọ a
Ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala na-arị elu agbada ụgbọ elu Nigeria
Usoro ọgwụgwọ izizi akwadoro maka cytopenic myelofibrosis
Oghere ikuku Russia emechila mba iri atọ na isii
A machibidoro ndị na-agba ọsọ si Russia na Belarus iwu na Boston ...
Ụgbọ mmiri Holland America Line nke itoolu laghachiri na...
Ụdị mkpokọta okomoko na-abịa na Cap Cana. Playa...
Sandals Foundation na-akwado ndị ntorobịa Caribbean na ...
IATA na-agba Asia-Pacific ume ka ọ mee ngwa ngwa ụgbọ elu ya…
Mịnịsta na-ahụ maka njem nlegharị anya Jamaica kwara arịrị maka ọnwụ nke…
Costa Cruises na-ewepụta mmemme ụgwọ ọrụ C|Club ọhụrụ ya
Stellar Line-up of Global Game-Changers na IMEX...
Ebe Posh Spa. New Seawater Spa na Hamptons
Mmetụta mmetụta nke ndị mmadụ na-enwe mmetụta dị ukwuu na mgbu nke...
Russia machibidoro PM Boris Johnson, ọkara nke gọọmentị UK
Agwaetiti Cayman na-enweta nkwalite site na njem nlegharị anya
Ebe ọhụrụ na oche ndị ọzọ dị na...
Ụgbọ elu Southwest na-ebupụta ụgwọ ọhụrụ na mbufefe...
27 nwụrụ, ọtụtụ merụrụ ahụ na nnukwu ọkụ New Delhi